Bogga Ciyaaraha, 11 January 2019
Ronaldo oo Wajahaya Dacwad Kufsi
Booliska gobolka Nevada ee dalkaan Mareykanka ayaa si rasmi ah u weydiistay booliska dalka Talyaaniga in uu tijaabada hidasidaha loo yaqaano DNA ka qaado xidiga kooxda Juventus iyo xulka Portugal Cristiano Ronaldo.
Levante oo Garaacday Barcelona
Kooxda Barcelona ayaa guuldarro lama filaan ah kala kulantay kooxda Levante lugta koowaad ee wareega 16-ka tartanka Copa Del Rey, kaddib marki looga badiyay 2-1.
PSG oo ka hartay tartanka French Cup
Kooxda Paris St Germain ayaa xalay si lama filaan ah uga hartay tartanka French League Cup, kadib marki ay 2-1 ku khasaartay kooxda Guingamp.
Mohamed Salah oo noqday laacibka Africa
Weeraryahanka kubadda cagta xulka Masar iyo kooxda Liverpool Mohamed Salah ayaa xalay loo doortay laacibka sanadka ee qaaradda Africa markiisii labaad oo xiriir ah.
Masar oo martigelin doono Koobka Qaramada Africa
Dalka Masar ayaa martigelin doono ciyaaraha Koobka Qaramada Africa ee sannadkan , kaddib marki ay Talaadadi shalay Guddiga Fulinta xiriirka kubadda cagta Africa ay sidaasi go’aamiyeen.
Barcelona oo raadineysa Koulibaly
Wararka ka imanaya dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in kooxda kubadda cagta Barcelona ee dalka Spain ay aad u daneyneyso in ay iibsato laacibka difaaca uga ciyaara Napoli Kalidou Koulibaly.
Man City oo Hakisay Liverpool
Guuldarradi ugu horreysay xilli ciyaareedkan 2018/2019 ayaa xalay soo gaartay kooxda Liverpool kaddib marki ay 2-1 ku khasaartay ciyaar ay garoonka Ethihad Stadium kula dheeshay kooxda Manchester City.
Real Madrid oo Jahwareer Ku Billowday Sannadka Cusub
Kooxda Real Madrid ayaa ku billowday sannadkaan cusub ee 2019-ka madax-wareer kaddib marki ay barbar dhac 2-2- ah kala laabatay garoonka Estadio de la Ceramica halkaas oo ay marti ugu aheyd xalay kooxda Villarreal.
Isku aadka koobka EFL-ka Ingiriiska
Waxaa la sameeyay isku aadka wareega semi-fnalka ee koobka FA Cup-ka dalka Ingiriiska, kaddib marki xalay lasoo gaba gabeeyay wareega sideeda kooxood.
Real Madrid oo Gaartay Finalka CWC
Real Madrid ayaa gaartay finalka Koobka Naadiyada Aduunka, kaddib marki ay 3-1 uga badisay kooxda Kashima Antlers ee dalka Japan.
Manchester United oo Ceyrisey Mourinho
Manchester United ayaa shaqadii ka erisay maamule Jose Mourinho, kadib laba sano iyo bar oo uu joogay Old Trafford.
Isku-aadka CL ee Wareegga 16-aad oo La Sameeyay
Isku aadka warreegga 16-aad ee koobka Champions Leauge ayaaa la sameeyay maanta. Waxa la ciyaari doonaa lugta koowaad ee kulamada 12-13 iyo 19-20 February, halka is aragga xigana uu noqon doono 5-6 and 12-13 March.